Munaasabad lagu taageerayo guulihii ciidamada DKMG oo Muqdisho lagu qabtey – SBC
Munaasabad lagu taageerayo guulihii ciidamada DKMG oo Muqdisho lagu qabtey
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan Baarlamanka DKMG ah, gudoomiyeyaasha 16-ka degmo ee magaalada Muqdisho, Taliye yaal iyo marti sharaf kale ayaa waxaa ay ka dhacday magaalada Muqdisho taas oo lagu taageerayay Guulaha ay ciidamada Dowlada KMG ah ka gaareen dagaaladii ka socday Muqdisho.
Dhamaan Saraakiisha, Xildhibaanada iyo gudoomiye yaashii ka soo qeyb galay kulankaasi waxay halkaasi ka sheegeen in ay siweyn ugu qanacsanyihiin guulaha ay ciidamada qaranka soo hoyeen islamarkaana ay u dirayaan hambalyo baraarujin wadata.
Xildhibaanad Xaawo Maxamed Siyaar oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka Dowlada KMG ah oo iyado ka hadashay madasha ayaa sheegtay in guulaha ay ciidamadu gaareen ay ka baarlamaan ahaan ay ku faraxsanyihiin islamarkaana ay ugu hambalyeynayaan .
Waxaa sidoo kale halkaasi hadalo baraarujin ku aadan ciidamada DKMG ah ka soo jeediyay gudoomiye yaal ka mid ah kuwa 16-ka degmo ee magaalada Muqdisho iyagoona dhanka shacabka ku booriyay in lala garab istaago ciidanka taageero dhinacwalba leh .
Taliyaha qeybta Bartamaha Ciidamada Police-ka DKMG ah ee gobolka Banaadir Gen Cali Gaab ayaa isna halkaasi ka sheegay in ay u hambalyeynayaan ciidanka militeriga DKMG ah kuwa Amisom iyo Ahlusuna waljameeca guulaha ay soo hoyeen islamarkaana loo baahanyahay in ay sii siyaadiyaan dadaalka ay wadaan.
Gen Cali Gaab oo arimo badan ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in shacabweynaha Soomaaliyeed Meelkasta oo ay joogaan loogaga baahanyahay taageero ay ku garab istaagaan ciidamada Dowlada Somalia ee dadaalka ku jira isagoona intaasi raaciyay in shacabka siiba kuwa ku sugan muqdisho loogaga baahanyahay in ay muujiyaan taageero dhinac walbo ah, sida wada shaqeyn buuxda oo ay ciidanka Police-ka la yeeshaan lana soo socodsiiyaan wax walba oo lidi ku ah amaanka .
Gen cali Gaab waxa uu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay kana codsaday shirkadaha waaweyn ee ka dhisan magaalada Muqdisho sida kuwa isgaarsiinta in ay ciidanka kala qeyb qaataan shaqada ay ku jiraan oo ay u sameeyaan taleefoono lacag la’aan ah degmooyinka Muqdisho si logula soo xiriiro ciidanka si marka ay wax dhacaanka u ogaadaan waxna uga qabtaan.
Ugu dambeyntii dhamaan masuuliyiintii munaasabadaasi ku sugnaa waxay balan qaadeen in maalmaha soosocda iyagoo isku duuban ay booqasho ku gaaridoonaan aagaga ay guulaha ka soo hoyeen Ciidamada Dowlada KMG ah .